22/11/2011 : Fampieritreretana : pitik’afo bitika sisa …!
Ny fahitana ny hetsika androany dia nahatsapana tsapa fa pitik’afo kely monja dia mety hampitroatra ny Malagasy atsy ho atsy satria maro loatra ireo manararaotra ny fahantrany ka tsy azony ekena intsony. Ny firongatrin’ny fitakiana fitsaram-bahoaka ihany koa dia ahatsapana fa tsy matoky ny fitsarana Malagasy intsony ny mpiray tanindrazana nefa mbola naverina amin’ny toerany ihany ilay efa namoafady tao amin’ny minstera “fieren’ny osa”. Manahy manko ireo niresadresaka teny an-tssin’ny fihetsiketsehana androany sao handoa vola be fotsiny ireto sinoa ireto dia hafahin’ny Fitsarana madiodio ary dia tsy hisy vidiny ny ain’ny Malagasy mpiray tanindrazana ka izay no nahatonga ny fitakiana fitsaram-bahoaka.
Raha nitafa tamin’ny mpanao gazety tonga teny Behoririka ny Jly “Baomba” androany dia nilaza fa tsy tokony hisy ny mpanararaotra handroba fananan’olona. Mipetraka avy hatrany ny fanontaniana hoe taiza izany fomba fisainana izany tamin’ny taona 2009 sa rehefa manao vain-drahalahy tsy maharary ny sasany.
Nampangaina ho nanararaotra ity hetsika teo Behoririka ity ny mpandala ny ara-dalàna raha ny fanehoan-kevitra nentin’I “Baomba”. Ny vahoakan’I Magro anefa dia niatrika ny hetsika fanaony isan’andro tao an-kianjany ary tsy nandao izany raha tsy taorian’ny hafatra nentin’ny Filoha RAVALOMANANA. Izany hoe 45 minitra teo ho eo taorian’ny fotoana nitenenan’ity jeneraly manam-pahaizana ity. Ity marina no tonga amin’ny fitenenana malaza ankehitriny hoe “ na zaza marary kibo aza, lazain’ny FATE fa noho ny Filoha RAVALOMANANA”.
22/11/2011 : Behoririka : tsy hanaiky hitsahina intsony ny Malagasy (+vidéos)
Nisahotaka tanteraka Behoririka sy ny manodidina androany nanomboka tamin’ny mitataovovonana. Araky ny vaovaop nampitain’ireo mpivarotra eny amin’ny manodidina dia sinoa iray mpambongady no namono nahafaty mpiray tanindrazana izarya rehefa nisy fifamadihana tamin’ny entam-barotra namidiny. Nitraoatra noho izany ireo Malagasy rehetra naharay ity vaovao ity ka dia naneho ny alahelony manoloana ny tranobe misy ny fivarotan’ialy sinoa sady toerana nahavitany izao herisetra mamoafady izao.
Nitaky ny namoahana ho hitam-bahoaka ireo nahavanin-doza ny mponina sy mpivarotra manodidina. Ora maro no niaretan’izy ireo nifanatrika tamin’ny EMMOREG naneho izany fitakiany izany. Nidina an-kianja mihitsy ny Jeneraly “baomba” niezaka nandamina saingy tsy nahaleo tosika ny hamaron’”ny vahoaka ary dia efa nanomboka tsy nahafehy tena indray. Nambaran’ireto mpitaky ireto fa “efa ela loatra no nanambanian’ireto sinoa ireto ny Malagasy ka tsy hanaiky intsony” izy ireo.
Niakatra ny hafanana …
Nanomboka tamin’ny telo ora tolakandro teo ho eo dia niakatra tanteraka ny hafanana teo amin’ireo mpanao fihetsiketsehana. Tsy voatana intsony ireo nitokona manodidina ny rano maimbo ka dia niakatra nihazo ny lalana mankany Tsiazontafo. Nanomboka nisy nitoraka ilay trano lehibe nisy ilauy sinoa nahavanin-doza na dia efa tsy tao intsony aza ity farany. Teo dia nandray andraikitra ilay jeneraly malaza ka izy tenany mihitsy no namoaka basy sy nitifitra ary nanenjika ireo naneho ny hatezerany. Nirefodrefotra ny basy ary mbola namoaka kalachnikov mihitsy “Ra-baomba” ary tsy niahotra nanapoaka izany tamin’ny fotoana nieritreretany nampety izany. Tsy niala lavitra anefa ny mpanao fihetsiketsehana fa nitoby manoloana ny “Building Ramaroson” ary dia nirefotra im-betsaka indray ny grenady mandatsa-dranomaso saingy tsy nandeha amin’ny laoniny avokoa ka zary tokotany sy toeram-piasana no lasibatra.
09/10/2011 : Madagascar au bord de l'explosion : l’accaparement de vastes territoires se poursuit
«Appuyé par l'arme de la corruption, le transfert massif des terres et ses effets dévastateurs touche de plein fouet les familles malgaches qui subissent pressions, menaces et intimidations.»
La situation est devenue particulièrement difficile, voire explosive à Madagascar, un des douze pays les plus pauvres du monde, mais dont les potentialités aiguisent les appétits. Des milliers de familles sont chassées des terres sur lesquelles elles vivent souvent depuis plusieurs générations. Face aux convoitises, seule la possession d’un titre ou d’un certificat foncier permet d’entreprendre des actions de justice en cas de conflit. La procédure est longue, compliquée et peut coûter jusqu’à 30.000 ariary (11,50 euros). Mais il faut savoir que le Smic malgache est à 60.000 ariary (23 euros) et qu’un instituteur bien payé peut gagner 40 euros.
Golias Hebdo N° 204 - 4e année
Semaine du 29 septembre au 5 octobre 2011
12/09/2011 : Ariary : hanova mari-bola ny FATE ? (+vidéo)
Mampanahy ny mpahay toe-karena ankehitriny ny momba ny sandan’ny vola Malagasy. Manampy trotraka izany ny fisian’ny irakin’ny FATE eny amin’ny hainoamanjerymatetika mitondra fanazavana mikasika ny politika ara-bola ampiasaina eto Madagasikara. Tsy dia salama loatra manko ny “Ariary” hatramin’ny 2009 no mankaty noho ny fihenan’ny fifanakalozana ara-baroatra amin’iero firenena goavana izay mitsipaka ny FATE. Ary ato ho ato dia tsy azo hidovirana intsony ny fihenan’ny sandan’ny volantsika satria efa ny tahirim-bolamena ao amin’ny Banky Foibe no namidin’ny FATE azahoana vola hampihodinana ny raharaham-panjakana.
Io volamena ao amin’ny Banky Foibe io anefa no antoka azahoana mitazona ny lanjan’ny vola eo amin’ny Firenena iray sady ahafahana manafatra solika eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Ho an’ny mpahay toe-karena dia tsy misy ankoatran’ny fanovana mari-bola no ahafahana manarina vonjimaika ny sandam-bola rehefa ambivitra ho fongana ny tahiry fototra ao amin’ny Banky Foibe. Ahiana arak’izany ny hiverenan’ny “Franc Malgache” izay endriky ny fanjanahana sady mety amin’ireto zanakin’ny “renimalala” nanongam-panjakana ireto rahateo.
17/08/2011 : Ankorondrano Andranomahery : nitondra fanampiana ho an'ny tsy manan-kialofana ny tanora TIM (+vidéos)
Olona dimy namoy ny ainy ary fianakaviana 110 no indray tsy nanan-kialofana. Io no vokary ny hain-trano nitranga tao amin'ny Fokontany Andranomahery Ankorondrano ny alin'ny Alakamisy 11 Aogositra lasa teo tokony tamin'ny 08 ora alina tany ho any. Araky ny fanazavan'ireo niharam-boina dia fifanolanana teo amin'ny mpivady mahakasika resaka famadihana no niandohan'ny loza dia izao niteraka voina ho an'ny mpiray tanàna izao.
Sary Ankorondrano Andranomahery
Tonga nitondra izay voatsirambin'ny tanana ho an'ireo fianakaviana tsy manan-kialofana sy namangy fahoriana ireo mana-manjo ny tanora Tiako I Madagasikara androany. Lamba fitafy, akanjo, labozy sy savony ireo no fanampiana nentin'izy ireo natolotra ireto mpiray tanindrazana ireto. Ankoatr'izay dia nanatitra mofo ihany koa izy ireo ho tohana ara-tsakafo ho an'izay tena mila izany. Taorian'ny fanolorana ny fanampiana ara-pitaovana dia nitsapa alahelo ireo fianakaviana mana-manjo ny tanora TIM. Tsara ny manamarika fa raim-pianakaviana iray niaraka tamin'ny zanany efatra mianadahy ireto niandaosin'ny fahafatesana ireto ary mbola am-bohitra ny razana hatramin'ny androany noho ny fahasarotana ara-bola amin'ny fitondrana azy ireo hasitrika any amin'ny Faritra Atsimo Andrefana izay misy ny fasan-drazany.
15/08/2011 : Mizaka ny vokatry ny krizy ny fizahan-tany any Analanjirofo (+vidéos)
Mitaraina tanteraka ny mponina any amin’ny Faritra Analanjirofo noho halafon’ny fiainana amin’izao fotoana izao. Hatrany amin’ny fambolem-bary izay sehatra mamelona iny faritra iny dia tsy mahavelona intsony. Taloha araky ny filazan’ny mponina di mahatratra zato daba mahery ny ambim-bava amin’ny vary fotsy miakatra. Ankehitriny kosa dia zara raha misy ivelomana isan’andro fa tysy ahafahana azahoana tahiry iatrehana ny andro sarotra.
Sary Fenerive Atsinanana
Ny sehatry ny fizahan-tany koa dia tsy namokatra tamin’ity taona ity raha ny filazan’ny mponina ao Fenerive Atsinanana. Isan’ny nampalaina ny mpitsidika iny Faritra iny ny haratsian’ny lalana noho ny fivezivezen’ireo fiara vaventy mitatitra fasi-mainty avy any Soanierana Ivongo ka manimba ny lalam-pirenena faha-5. Vokany malaina ny hihazo an’I Foulpointe sy Fenerive Atsinanana ny olon-tsotra mitondra fiara hiala sasatra miaraka amin’ny fianakaviany. Na ireo mpitatitra aza dia efa mikolay amin’ity lalam-pirenena iray ity satria manodidina ny ora iray sy sasany ankehitriny ny anaovana an’I Toamasina hatreo Mahavelona (Foulpointe) izay mirefy 52 Km monja.
Izany rehetra izany dia misy fiantraikany avy hatrany amin’ny fiharian’ny mponina any Fenerive Atsinanana. Ny “cyclo-pousse” dia isan’ny tena mitaraina. Nihena tanteraka ny vola miditra amin’izy ireo ka na dia mahavelona aza ny asany dia misy fahabangana lehibe noho ny tsy fisian’ny mpizahantany. Manginy fotsiny ireo vokatra maro isan-karazany izay voatery amidy mora noho ny tahotra ny fahasimbana.
04/08/2011 : Herisetran'ny FATE : ambavahoana ny Dr. Julien Rakoto (+vidéo)
Efa am-bolana maro izao no tsaboina eny amin'ny hopitaly ny Depiote Julien Rakoto izay mpikambana, avy amin'ny Ankolafy Zafy Albert, ao amin'ny kongresin'ny tetezamita araky ny tovana tany Addis-Abeba. Olana eo amin'ny taova fisefoana no manjo azy ary efa tena atahorana ny momba azy amin'izao fotoana izao. Raha ny hitan'ny mpiara-mitolona rehetra sy ny voalazan'ny fianakaviany dia noho ireo "grenades lacrymogènes" mahery vaika ampiasain'ny FATE no nahatonga izao karazana homamiadana mahazo ity mpitari-tolona ity izao. Volana maro mialohan'ny nitsaboana azy tokoa dia hita mikohaka lava sady sepotra ny Dr. Julien. Ankehitriny ary dia nanapa-kevitra ireo mpitsabo azy fa halefa mody any an-tanindrazana ny marary satria efa manahirana ny momba azy.
Moramora kokoa araky ny fahitan'ny mpitsabo azy ny fitanterana dieny mbola velon'aina izy. Raha ny filazan'ny Depiote Zafilahy Stanislas manko dia ahiana tsy ho namana intsony ny Depiote Julien Rkoto raha ny fijery azy. Na izany aza dia adidi'ny mpiara-belona ny mitsabo ka noho izany dia nanatanteraka tsipaipaika ho fanampiana an'ity mpiara-mitolona ity ny vahoakan'ny Kianjan'ny Finoana ry dia nahangona mihoatra ny roa hetsy ariary.
Raha tsiahivina dia efa nisy mpitolona namoy ny ainy vokatry ny baomba mandatsa-dranomaso ampiasain'ny hery famoretan'ny FATE ary vehivavy mbola erotrerony izy io. Ankoatran'ny fampidirana am-ponja sy ny famonoana mpiray tanindrazana mivantana dia isan'ny tena mampitondra faisana ny mpiara-belona ity fitaovam-piadiana simika ampiasain'ny hery famoretana ity.
01/08/2011 : Mbola mahavita lavitra noho ny FATE ny olon-tsotra (+vidéos)
Manodidina ny 5 isan-jato ny fiakaran’ny salam-pahafahana CEPE tao Anosiala Ambohidratrimo sy Anosiarivo. Rehefa tsy voaloan’ny manam-pahefana intsony ny karaman’ny mpampianatra FRAM dia fikambanana manao asa sosialy iray no nandray an-tanana izany ka karazana fanampiana natakalo “cours d’appui” mamaim-poana no nanaovana izany. Samy nanana ny fomba nanatanterahana izany ireo mpampianatra tamin’ireto toerena roa ireto ary dia izao nitondra vokan-tsoa izao ny ezaka. Samy nahazo tombony na ny mpianatra na ny mpampianatra.
Sary "Mamiko ny Taniko Madagasikara"
Manana vina fampandrosoana any ifotony ity fikambanana ity ary efa maro ny asa niandraketany hanatanterahana izany. Efa nisy ny famitana CSBII nitohy amin’izao asa ao anatin’ny tontolon’ny fampianarana izao ary mbola hitohy amin’ny sehatry ny fihariana ambanivohitra araky ny fanazavan’ny tomponandraikitra. Eo am-panangana ny atao hoe “banque alimentaire” izy ireo ankehitriny. Manakaiky ny fomba fiasan’ny « silo » naorin’ny Filoha RAVALOMANANA tamin’ny fotoanandrony izy ity ka ankoatrin’ny fazahoana tombony amin’ny masom-boly sy ny zezika ary ny fitahirizam-bokatra dia misy ny fanofanana misampana maromaro omena ireo tantsaha eo amin’ny tanàna misy ny fotodrafitrasa. Isan’nympandrindra izao fikambana izao i Riri Be izay mpitarika ny zatovo any Toamasina ary efa nogadrain’ny FATE tato anatin’izao krizy izao rehefa tsy nanaiky hanao fifanarahana maloto taminy.
29/07/2011 : Miala any indray ny antsojay amin'ny mpanao gazety
Manohy ny asa fampihorohorony amin'ny mpanao gazety i Rolly Mercia. ankoatran'ny fanenjehana efa nataony tamin'ity mpanao gazety iray ao amin'ny Midi Madagasikara ity tamin'ny fotoanan'ny fihaonana tany Gaborone Botswana dia manelingelina azy ireo indray ny lahatsoratra nosoratan'i Rajaofera Eugène tamin'ny 27 jolay teo mikasika ny mety nihaonan'i TGV tamin'ny Amiraly Didier Ratsiraka tany Lafrantsa. Vokany dia nalefa tamin'ny onjam-peo sy ny televizionam-pirenena ity fampitam-baovao avy amin'ny minisitry ny serasera FATE ity. Voatonona mazava ao anatiny ny anaran'ity mpanao gazety ity na dia tsy mbola nisy aza fampiantsoana na fihaonan'i Rolly Mercia taminy. raha tsiahiviny dia io mpanao gazety io ihany ilay nolazain'i Rolly Mercia fa handraisany fepetra hentitra raha vao miverina an-tanindrazana tamin'ny fotoana nihaon'ny hery politika rehetra tany Gaborone.
Mahana amin'ny rasty nataony teo amin'ny sehatry ny asa fanaovan-gazety hatrizay angamba ity mpanompon'i TGV ity ka raha vao misy mahita toe-javatra mety hanohana ny fihinanany miaraka amin'izay "tompoiny" dia miakatra ny haromotany. Iza anefa no tena namorona lainga teto amin'ity Firenena ity mba hiakarana eo amin'ny fitondrana? Iza no nikarama volabe hanohanana ny fanonganam-panjakana hatramin'ny taona 2009 no mankaty? Ny rehetra no mahafantatra ny tantara ary tokony samy mahatsiaro ihany koa fa ny zavatra rehetra mandalo fa ny vahoaka mitoetra.
MISE_EN_DEMEURE_MIDI.pdf 172.86 Ko
COMMUNIQUE_DE_PRESSE.pdf 196.27 Ko
26/07/2011 : JIRAMA : miverina indray ny « délestage »
Andro maromaro izao no miverina mikaikaika indray ny mponina eto an-drenivohitra noho ny fahatapahan’ny jiro isakin’ny hariva. Maharitra manodidina ny 15 minitra ka hatramin’ny ora iray sy sasany izany fahatapahana izany ary tsy mitranga raha tsy efa maizina ny andro. Rehefa nohadihadian’ny mpanao gazety amin’ny hainoamanan-jery sasany ny tao amin’ny JIRAMA dia nilaza fa ireo orinasa tsy miankina miara-miasa aminy no tsy maharaka ny famatsiana herinaratra ka miteraka izany olana izany. Gaboraraka amin’ny volam-bahaoaka ihany ny fijery an’izao zava-mitranga izao satria ny minitra vitsy tsy isian’ny jiro mirehitra dia tombony ho an’ny JIRAMA sy ny namany amin’ny alalan’ny solika ampiasainy.
Na izany aza ny tena mampatahotra ny mponina eto an-drenivohitra dia ny firongatry ny tsy fandriampahalemana. Amin’ny andro ataoandro sy mazava aza moa sahy manao ny asany ny mpanaoratsy maika fa raha maty lava ny jiro dia vao maika hampirongatra azy ireo izany ary ny vahaoka hatrany no hizaka ny vokany.
Vazaha tratra nampiditra basy
Toa efa mahazatra ny maro hy mahita ny DST misambotra olona mitondra fitaovam-piadiana na dia hafa kely aza tamin’ity indray mitoraka ity. Tany Antsiranana no volaza fa nahatrarana ireto fitaovam-piadiana mahery vaika niaraka tamin’ny bala amanarivony. Ireo fitaovana ihany hatreto no naseho ny mpanao gazety fa ny tompony dia nolazaina fa notanana vonjy maika any Antsiranana ka tsy afaka naseho. Fanazavana nentin’ny kaomisera Charlie Nankany,lehiben’ny polisy politika an’ny FATE, ny fikasana hanakorontana ny Firenena amin’ny fahitana ireto fitaovana ireto. Mbola tohin’ny tampi-maso hatrany anefa ity resaka ity raha alalinina satria mba tsy ahitan’ny Malagasy ny filetehan’ny “sambo TGV” dia terena hitodika any amin’ny zavatra hafa ny mpiray tanindrazana.
Amidin'ny FATE ny zanaka Malagasy
Ao anatin’izany olana rehetra izany no milaza fa hanome sehatra hiasan’ny Saodiana eo amin’ny fizahantany ny FATE. Mifanohitra tanteraka ny zava-mitranga satria raha ny tokony ho izy dia alamina aloha ny fandriampahalemana vao mamporisika ny mpizahantany hoavy izay eo amin’ny fitondrana. Ankehitriny anefa toa antsoina hizaha ny aretin’ny Malagasy ireo vahiny ireo ka ao anaty tany tsy milamina no anomezana indray tsena an’ireto arabo ireto. Toa ny hanaratsy ny firenena any amin’ireo firenen-kafa sy hivarotra ny zanaka Malagasy amin’ny mpizahantany mamoafady no tanjona. Rehefa mitobaka manko ny mpizahantany amin'ny tany andalovan'ny krizy toa antsika dia mahazo vahana hoazy ny fivarotan-tena ary na ny ray aman-dReny aza zary mamporisika ny zanany hanao izany mba azahoana vola ivelomana.